ဆေးတောင့်ဖြည့်စက်၊ တက်ဘလက်များ နှိပ်စက်၊ အမှုန့်ရောစပ်စက် - ညှိထားသည်။
ODF Strip Pouch ထုပ်ပိုးစက်
strip pouch packing machine သည် ပါးစပ်မှ ပျော်ဝင်နိုင်သော ရုပ်ရှင်များ၊ ပါးစပ်ပါးပါးရုပ်ရှင်များနှင့် ကော်ပတ်တီးများကဲ့သို့သော အပြားသေးသေးလေးများကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးထုပ်ပိုးသည့်စက်ဖြစ်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သစ္စာရှိမှု
Aligned ၏ ထုတ်ကုန်နေရာချထားမှုသည် ဂလိုဘယ်လိုက်ပြောင်းသည်။
ကျယ်ပြန့်သော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်ကွန်ရက်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ။
အလိုအလျောက် အခြောက်ခံစက် (ပါးစပ်အတွက်...
မော်ဒယ် TAMP-A အညွှန်း အကျယ်...
■ အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်ခြင်း...
■ စုပ်ယူခြင်းမပြုသော ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ...
မော်ဒယ် KHG-60 Filling c...
Aligned Machinery ကို ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ နိုင်ငံတကာ မြို့တော်တွင် ကုမ္ပဏီခွဲများနှင့် စက်ရုံငါးခုဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။၎င်းသည် R&D၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ဆေးဝါးစက်ယန္တရားများနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် နည်းပညာအခြေခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အဓိကထောက်ပံ့မှုနယ်ပယ်မှာ ခိုင်မာသောပြင်ဆင်မှုကိရိယာများနှင့် ခံတွင်းသုံးပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်နိုင်သောရုပ်ရှင်ဖြေရှင်းနည်းများအပြင် ပြီးပြည့်စုံသော ပါးစပ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ .
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆီသို့ ဆက်လက်တည်မြဲနေခြင်းသည် Aligned ၏ အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ပြီးကတည်းက Aligned သည် ဆေးဝါးနှင့် ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် တစ်ခုတည်းသော ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး သိပ္ပံနည်းကျနှင့် တင်းကျပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခု ဖန်တီးထားသည်။EPCM ပရောဂျက်၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်၊ Aligned သည် စျေးကွက်များစွာတွင် အစိုင်အခဲဆေးထိုးပုံစံနှင့် ပါးစပ်အရည်လိုင်း၏ ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှေ့ဆက်အိပ်မက်ပါ၊ တောက်ပသော-2021 ညီလာခံကိုဖန်တီးပါ။
2021 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လေနှင့်လှိုင်းများကို အတူတကွစီးပြီး၊ လှေတစ်စင်းတည်းတွင် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကာ ပင်လယ်သို့ တိုက်ရိုက်ရွက်လွှင့်ပါမည်။ဒီနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်ပြီး အောင်မြင်တာတော့ အတက်အကျတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။2021 မှာ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါက အမှတ်တရနဲ့ သမိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။...
"2022"နှစ်ကို ဘယ်လိုကြိုဆိုမလဲ" Theme sharing အစည်းအဝေး
မကြာသေးမီက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆောင်ပုဒ်နှင့်ပတ်သက်သည့် မျှဝေမှုအစီအစဉ်တစ်ခုကျင်းပရန် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ကျော်ကြားသူများကို ဖိတ်ကြားရန် ဂုဏ်ယူခဲ့ပါသည်။ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီတွင် သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း ရောက်ရှိလာပါမည်။Zhejiang Onepaper Smart Equipment Co., Ltd. မှ Mr. Wang ၏မျှဝေခြင်းကို ကြားသိရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
လက်ရှိ Oral Thin Films ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဆေးဝါးပြင်ဆင်မှုအများအပြားကို တက်ဘလက်၊ မြေမှုန့်၊ အမှုန့်နှင့် အရည်ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။ယေဘုယျအားဖြင့်၊ တက်ဘလက်ဒီဇိုင်းသည် တိကျသောဆေးပမာဏကို မျိုချရန် သို့မဟုတ် ဝါးရန် လူနာအား တင်ပြသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။သို့သော် အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးသူနှင့် ကလေးအထူးကု လူနာများသည် ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် မျိုချရန် ခက်ခဲသည်...